Fikambanan’ny mpianatra eny Ankatso : Manameloka ny fanakorontanana -
AccueilSongandinaFikambanan’ny mpianatra eny Ankatso : Manameloka ny fanakorontanana
Fikambanan’ny mpianatra eny Ankatso : Manameloka ny fanakorontanana
Manoloana ny toe-draharaha politika mafampana ankehitriny dia nanao fanambarana ireo filohan’ny mpianatra eny anivon’ny anjerimanontolo, avy amin’ny ENS, Polytechnique, Agronome, Degs, ny lettres, ny Sciences ary Medecine, omaly maraina, amin’ny mba hisian’ny fitoniana eto amin’ny tany sy ny firenena. Ireto mpianatra ireto izay manahy mafy ny amin’ny mety hisian’ny fanararaotana sy fanakorontanana mandritry io hetsika ataon’ny Solombavambahoaka amin’ny sabotsy io, ka hiteraka savorovoro eto amin’ny firenena ary hiantraika amin’ny fianaran’izy ireo. “Manahy izahay manoloana ny zava-misy amin’ny hetsika maro samihafa eto amintsika. Mangataka izahay mpianatra rehetra mba atao anaty filaminana ny zavatra rehetra ataon’ny andaniny sy ny ankilany mba tsy hisy fiantraikany aminay, ka mba hahafahana manatanteraka amin’ny antsakany sy andavany ny fianarana, izay vao manomboka ny taom-pianarana 2017-2018”, hoy i Ratianarivo Dague, filohan’ny ENS. Tsy ireo mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo ihany fa ny ho avin’ny tanora malagasy rehetra mihitsy no voatohintohina amin’ity raharaha ity hoy hatrany ny fanazavana. “Taona hamaritra ny ho avin’ny tanora amin’ny 5 taona manaraka ity taona fiatrehana ny fifidianana ity, ka manahy ny hisian’ny korontana izahay. Noho izany, mangataka ny tompon’andraikitra handray fepetra mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana fa tsy vahaolana intsony ny hiverenan’ny firenena ao anatin’ny krizy fa potika ny ho avin’ny tanora”, hoy kosa indray, Benjamin, filohan’ny mpianatra ho mpitsabo.
Tsy ho fitaovana politika intsony
Tranga tsy azo zoviana amin’ny rehetra intsony eto amin’ny firenena ny fanaovana fitaovana politika ireo mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo. Manoloana izay indrindra, dia nanamafy hatrany ireo mpianatra fa tsy hanaiky atao tohatra fiakarana ahazoana seza isaka ny misy hetsika tahaka izao intsony. “Mikatso ny fianarana rehefa raikitra ny korontana eto amintsika nefa tsy misy fijerena ny tombontsoan’ny mpianatra akory”, hoy hatrany ny fanamarihana. Mangataka ny mpianatra ao amin’ny fikambanana tsirairay eny amin’ny anjerimanontolo mba tsy ho fitaovana politika na amin’ny antoko inona na amin’ny antoko inona satria tsy manao politika ny mpianatra. Nanambara hatrany izy ireo fa afaka manao ny tatitra am-pahalalahana ireto solombavambahoaka, fa aoka kosa tsy hitarika fanakorontanana ny firenena.